Mogadishu Journal » 2018 » July » 26
Golaha Wasiirada oo galabta magacaabay Saddex Safiir
Mjournal :-Shir golaha Wasiiradda Soomaaliya ay maanta yeesheen ayaa lagu magacaabay saddex Safiir oo Soomaaliya u fadhi doono caalamka, iyadoo aan la sheegin dalalka loo magacaabay. Wasiirka Arrimaha Dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaa soo jeediyay magacaabida saddex...
Abiy Ahmed oo maanta tagaya Mareykanka
Mjournal :-Ra’iisal wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa lagu wadaa in maanta safarkiisii ugu horeeyay uu ku gaaro magaalada Washington ee dalka Mareyknka, isaga oo 30ka bishan-na lagu wado in uu tago magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Booqashadiisan ayaa imaaneysa waqti...
Ciidamada Kenya oo lagu eedeeyay in ay kufsadeen Haween kunoolaa Beledxaawo
Mjournal :-Kornell Aadan Rufle oo ka mid ah Saraakiisha Ciidamada dowladda ee gobolka Gedo ayaa Ciidamada Kenya ku eedeeyay iney kufsi ka geysteen degaano ka mid ah gobolka Gedo. Waxa uu sheegay in 5 Haween oo ka mid Haweenka magaalada Baladxaawo iney geeyeen saldhig ay ku...
Qarax ka dhacay meel ku dhow safaarada Maraykanka ee magaalada Beijing
Mjournal :-Wargeyska Global Times ee Shiinaha ayaa qoray inay Boliska qabteen Haweeney isku bilbishay Baasiin meel ku Safaaradda Maraykanka ku leeyahay caasimadda dalkaasi ee Bejing. Goobjoogayaal la hadlay Wakaalladda Wararka REUTERS ayaa sheegay inay qarax ka maqleen meel ku...
Alexis Sanchez oo ka caawiyay kooxdiisa inay garaacdo AC Milan
Alexis Sanchez ayaa sabab u ahaa in kooxda Manchester United ay rigooreyaal ku badiso kulankii tartanka ICC oo ay wajaheen saaka kooxda AC Milan. Ciyaaryahanka reer Chile Sanchez ayaa ahaa ciyaaryahankii ugu fiicnaa United kulankii ka dhacay garoonka Carson StubHub Center ee ku...
Mjournal :-Ra’iisul wasaaraha xukuummadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa xalay xafiiskiisa ku qaabilay wafdi ka socoda waddamada Thailand, koonfur Afrika, Suudaan, Turkiga iyo Talyaaniga kuwaas oo ka qayb galay shirka caalamiga ah ee waxbarashada sare oo...
Mjournal :-Ciidamo ka tirsan kuwa Ammaanka ayaa xalay gurigiisa kala baxay Agaasime Wasaaradeed oo ka tirsan Wasaaradda Gargaarka iyo Maareynta Musiibooyinka ee Xukuumadda Soomaaliya. Sida wararku sheegayaan in Ciidamada ayaa guriga kala baxay agabyo ay ku jiraan Computor, iyadoo...
Mjournal :-Digreeto ka soo baxday xafiiska Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya maanta oo ay Taariikhda ku beegan tahay 26-ka July 2018 waxaa xilkii Wasiirnimo laga qaaday Wasiirkii Wasaaradda Waxbarashada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane C/raxmaan Daahir...